Buy Shake N Take (25,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ကြည့်သူအရေအတွက်: 182 (+ 1 )
Shake N Take လေးနဲ. ယခုဆိုရင်
အသီးတွေ အားလုံးကို ဖျော်ရည်အဖြစ်သို.
ပြောင်းလဲ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်သီးတွေကို အမြဲစားသုံးပါက၊ သောက်သုံးပါက
Rocket မှာ ရောင်းချနေတဲ့ Shake N Take လေးဟာဆိုရင်ဖြင့်
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ဖြုတ်တပ်ရ အဆင်ပြေမှာဘဲ
ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ. သစ်သီးတွေ အားလုံးကို ဖျော်ရည် အဖြင့်သို.
ပြောင်းလဲ သောက်သုံးနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အထဲတွင် ရေဘူး နှစ်ဘူး ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ပိုက်ထည့်သောက်ရန်
အပေါက်လေးလည်း ပြုလုပ် ပေးထားပါတယ်။
များပြားလှတဲ အလုပ်တွေကြားမှာ Shake N Take ဖြင့်
အသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်ကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ကာ
တစ်နေ.တာလုံး လန်းဆန်းစေရန် မနက်ပိုင်း သစ်သီး ဖျော်ရည် ပြုလုပ်မလား
Gym မသွားခင် ဖျော်ရည်တစ်ခွက်နဲ. အားအင်တွေ ဖြည့်သွားမလား
ShakeNTake3လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
ဈေးနှုန်း – 25000 kyats
အမည်: Shake N Take